Impahla yesilumkiso → Impahla yokukhuthaza • I-P & M yokuhombisa ikhompyuter
Impahla yesilumkiso yentengiso ihlala ibekelwa indawo yokusebenza kunye neendawo zikawonke-wonke. Kamizelki Bayonyulwa kwakhona ngabaququzeleli bemidlalo ethile okanye ngamaqela, ngakumbi apho indawo yokuthatha inxaxheba kumnyhadala yindawo kawonkewonke, njengemidlalo yeebhayisikile okanye iimarathoni zeembaleki.
Impahla ebonakalayo yokusebenza kunye nemidlalo
Kwethu Ivenkile NONEImpahla yentengiso-isilumkiso kwimpahla"Sinikezela ngeemodeli ezinemilinganiselo yokusebenza efanelekileyo, ngenxa yokuba zigcina umsebenzi wazo wokuqala ixesha elide, zinceda ukwandisa ukubonakala ngexesha langokuhlwa ngenxa yemivimbo ebonakalisayo.
Sisebenzisa itekhnoloji yale mihla ukwenza ii-prints, kuba sifuna ukuqinisekisa kungekuphela ukhuseleko, kodwa kunye nokubonakala okunomtsalane, kodwa kunye nokuqina okuzinzileyo.
Phakathi kweempahla ezinokubonakala okuphezulu, ikakhulu sinikezela ngeivesti zokubonisa hayi kuphela kubantu abadala kwiinguqulelo ze-unisex, kodwa nakubantwana. Iimodeli ezikhoyo ziyafakwa zombini zibekwe phezu kwentloko. Ngenxa yobunzima bokukhanya, kulula ukuzisebenzisa. Ndingasetyenziselwa nayiphi na imozulu, zombini ehlotyeni nasebusika. Enkosi kwiipropathi zayo, izinto ezihambelana nezixhobo zisebenzisa umsebenzisi, ezivumela ukuba zidityaniswe ngokulula kunye i-hoodie, ibhatyi okanye ishethi yepolo.
Amaxabiso okhuphiswano, uyilo lomntu ngamnye
Enye yeenzuzo ezinkulu kukhuphiswano ixabiso eliphantsi. Ukwenza iprojekthi kwaye emva koko uyivelise ngamaxabiso asezantsi kuya kuba yimpendulo efanelekileyo kwabo banomdla ngexabiso eliphantsi okanye abanebhajethi encinci.
Uyilo kunye nokuthunga Intengiso elumkisa ngempahla Akunyanzelekanga ukuba ibize imali eninzi, eqinisekileyo ukukholisa abo bakuluhlahlo-lwabiwo mali.
Ukubakho kokumakisha okongeziweyo kweempahla nge isambatho sekhompyuter okanye ukushicilelwa kwesikrini izakuvumela umntu ngamnye.
Oku kubaluleke ngakumbi xa umsebenzisi ephakathi kwabameli bezinye iinkampani, amaziko- umz.xa usebenza kwindawo yokwakha okanye kwindawo yokugcina izinto apho iikontraki zeenkampani ezahlukeneyo zisebenza okanye ngexesha lemidlalo apho abathathi-nxaxheba abaninzi abamele imibutho eyahlukeneyo bathatha inxaxheba. Ukuxhathisa kwi-abrasion kuthetha ukuba ziya kuhlala zihleli ixesha elide. Umgangatho onjalo uya kuba nefuthe elihle ekuboneni uphawu.
I sweatshi enezipper ebonakalayoivestiivesti yokulumkisaIsikipa esibonakalisayoibhatyi ebonakalayoisilumkiso impahla ekhuselayoiimpahla ezibonakalayo eziphezuluukubonakala okuphezulu kwengubo ye-allegroiimpahla ezibonakalayo eziphezuluimpahla ephezulu ebonakalayoiimpahla zokulumkisa abaqhubiukubonakala okuphezulu kwempahla ebonakalayoImpahla ebonakalayo ebonakalayo ebonakalayoImpahla yoboya ebonakalayo ebonakalayoumenzi wempahla ebonakalayo ebonakalayoiimpahla ezibonakalayo ezibonakalayo zewarsawImpahla ebonakalayo ebonakalayo eneprintaiimpahla zokubonakala eziphezuluiimpahla ezibonakalayo ezibonakalayo eziphezuluIteyiphu yokulumkisa ngempahla eyi-3mIteyiphu yesilumkiso ebonakalayo kwimpahla eyi-3m
5 / 5 ( 11 iivoti )